Home Wararka Cabdi Xashi oo sheegay in wax iska badaleen mowqifkiisa midnimada Soomaaliya
Cabdi Xaashi ayaa khudbadiisii shalay waxaa ka muuqatay in isbadal ku yimid dareenkisii iyo qadiyidiisii uu ka aaminsanaa midnimada Soomaaliya iyo gooni isku taaga Soomaliland. Khudbadii shalay ayuu ku yiri; “Midnimada Soomaaliya & Gooni isu-taagga Somaliland midna muqadas ma aha”.
Hadalka ka soo yeeray Cabdi Xaashi ayaa ah mid cusub oo ka yaabiyay saaxibada ku yaqiinay Cabdi Xaashi in uu yahay shaqsi u ololeeya midnimada Soomaaliya. Waxaa la isweydiinaya hadalka ka soo yeeray Cabdi Haashi in uu ahaa mid uu cod ku raadsanayay iyo in uu yahay waa mid qalbiga kaga jirta oo in mudo uu ka qarinaya shacabka Soomaaliyeed.